Famokarana ve ianao?
Eny, mpanamboatra matihanina izahay hatramin'ny 1996 tamin'ny fanomezana sakafo faran'izay avo lenta, afaka manome ny vidin'ny suitabe be indrindra izahay.
Azonao atao ve ny manampy ahy hanao ny vokatra marika manokana?
Azo antoka, marika OEM azo ekena.
Inona no tombony azo avy amin'ny saosy saanao?
Voalohany, raha ampitahaina amin'ny saosy soja eny an-tsena, ny antsika tsy manana preservatives. Faharoa, manana karazana saosy maro isika izay samy manana ny tsirony ary azo ampiasaina amin'ny sakafo masaka samy hafa. Fahatelo, ny saosy ataontsika dia azo atao arakaraka ny torolalan'ny mpanjifa.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Hon Mirin sy Mirin Fuu?
Ny mirin fuu dia tena ambany ny alikaola ao anatiny ary manitra miaraka amin'ny tsiro ny hon mirin. Any amin'ny firenena sasany izay tsy anaovana alikaola ny alikaola dia azonao ampiasaina hanoloana ny hon mirin.
Azoko atao ve ny mitsidika ny orinasa misy anao?
Tongasoa fatratra, hasehonay anao ny làlan'ny famokarana sy ny toerana misy anay.
Firy ny mari-pankasitrahana anananao?
Ny orinasanay dia nahazo mari-pankasitrahana KOSHER, HALAL, ISO9001 ary HACCP.
Ahoana ny fanamboarana ny saosinao?
Ny saosy ataontsika dia vita amin'ny soja ary namboarina tamin'ny fanodinana nentim-paharazana sy voajanahary. Tsy misy manampy loko, ary tsy misy manampy preservative.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'i Chitsuru sy Chitsuruya?
Chitsuru no anaran'ny orinasanay-Nantong Chitsuru Foods Co., Ltd. Chitsuruya no marika orinasanay, manana an'i Senetsu, Waraku ary Edozen koa izahay.
Inona no manome ny ahidrano ny hanitra mampiavaka azy Umami?
Natiora. Ny ahidrano dia manana tsiro mamy masira voajanahary izay mahatonga azy hanandrana tena miavaka - ary tena tsara.
Fa maninona ny ahidrano marobe no manandrana trondro sy ny antsika tsy?
Ny tena zava-dehibe dia ny kalitaon'ny ahidrano ary avy eo ny fifandanjan'ny zava-manitra.
Aiza no ahafahana mividy ahidrano voaangaly kalitao avo lenta?
Misafidy marika Chitsuruya. Ny ahidrano amidinay araka ny fanodinana henjana. Nanaraka ny ISO9001 izahay; Fenitra HACCP hitazomana ny sakafo sy ny fahadiovan'ny sakafo. Ny ahidrano tsara namboarina dia manana ireto fiasa ireto: maitso mainty, tsiro, faharetana, tsy misy alga ao anaty ravina, tsy misy lavaka na ravina vaky. Te hahalala bebe kokoa, pls contact: [email voaaro]
Ahoana ny fisafidianana ahidrano maina (Fitaovana ahidrano roasted) manana kalitao avo lenta?
Ahidrano maina avo lenta: Matetika ny ahidrano maina dia miloko mainty sy volontsôkôlà loko ary mamirapiratra. Manitra mamy, malefaka, mamy kely izy ary tsy misy fofona hafahafa. Raha ny fijery azy, ny ahidrano dia malama ary tsy simba. Ary koa, izy io dia voatsinjara tsara ny hateviny sy ny sisiny madio. Tsy misy pentina! Tsy misy ahidrano maintso! Ahidrano maina ambany ambany: miloko mavo ary tsy misy famirapiratana. Matsiro izy io ary tsy misy manitra. Amin'ny endriny, simba ny ahidrano kely ary tsy malama. Ary afangaro amin'ny diatom sy ahidrano maitso ary misy pentina.
Inona no tsy itovizan'ny ahidrano Koreana sy ahidrano Chitsuruya?
Ny ahidrano Koreana dia masiaka loatra ka tsy afaka manao sushi ary ny tsiro tsy dia matsiro loatra.
Inona no tombony azo avy amin'ny saosy sainao amin'ny tavoahangy kely?
Azonao ampiasaina haingana izy io mba tsy ho mora mamokatra bakteria, izay manolana ny tsiro soja tany am-boalohany.
E-mail: [email voaaro]fr